28 Okthoba - 10 Novemba 2016
28 Okthoba - 10 Novemba 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
Izindaba: Ikhasi 5 Izindaba: Ikhasi 2
IMEYA ILALELA ABANTU ITHEKU LIQINISA UMTHETHO
CHARMEL PAYET IMEYA yeTheku uZandile Gumede izimisele ukuqeda nya ngenkohlakalo nokukhwabanisa eMkhandlwini, njengoba isimise abanye babasebenzi abatholakale bephula umthetho. Wonke amacala okukhwabanisa noma enkohlakalo abikwe eMkhandlwini kumanje ayaphenyisiswa. UGumede uphinde wagcizelela amazwi akhe okuzibophezela ekulweni nenkohlakalo kanye nokuqinisekisa ukuphatha ngobuqotho eThekwini ngenkathi enza isethulo sakhe samasonto onke eKomidini leziPhathimandla, mhlaka 19 Okthoba. Unxuse izikhulu zikaMasipala kanye nomphakathi ukuba babike uma kunezinsolo, babike eMnyangweni kaMasipala wezoPhenyo. ?Njengoba ngangishilo enkulumweni yami yokuqala njengeMeya, ngizimisele ukuqeda ngenkohlakalo eMkhandlwini. Ngizoqhubeka ngibike eKomidini leziPhathimandla ngebanga esesilihambile ngalolu daba,? kubeka uGumede. Ukuzibophezela kwakhe kusho ukuthi uMkhandlu uzimisele ukusebenza futhi abantu bengawethemba ekuphatheni izimali zomphakathi futhi lokho kufakazelwa umbiko weBack to Basics ka-Agasti 2016. Lo mbiko uveza ukuthi ngo-Agasti kubikwe amacala enkohlakalo nokukhwabanisa angu-219, kanti kuqaliwe ukuphenywa kwawo wonke. Abantu abangu-45 bavele ekomidini lokuqondiswa kwezigwegwe mayelana nenkohlakalo nokukhwabanisa ngo-Agasti kanti abangu-7 baxoshelwa amacala afanayo ngenyanga efanayo. Ngaphezu kwalokho, kufakwe unswinyo kulabo abasolwa ngokwenza inkohlakalo, ukukhwabanisa kanye nokungaphathi kahle izimali zomphakathi. Khona manjalo, kusukela iMeya yabekwa, uGumede useqalise izinhlelo eziningi zokuhlomisa abahlali ikakhulu eziqhakambisa ukuthi iTheku ngempela liyiDolobha elinakekelayo. UGumede ube nomhlangano wokuqala ngqa wokubonisana nabo bonke ababambe iqhaza ngomhlaka 13 Okthoba eCity Hall, eThekwini. ?Bangaphezu kuka-200 abantu abebehambele lo mhlangano lapho bengibazisa khona ngombono wami ngoMkhandlu kanye nalokhu engifisa ukukufeza ngenkathi ngiseyiMeya. Bekuyithuba lokuba ngazise izithunywa ngezinhlelo ezahlukene esiziqalile ukuqinisekisa ukuhlinzekwa kwezidingongqangi,? kusho uGumede. UGumede uthe uMasipala uzibophezele ekwenzeni umsebnzi ngobuqothotho, ngendlela esobala, ukulwa nokukhwabanisa, ukuphatha ngendlela izimali kanye nokusebenzisa uhlelo lwangaphakathi lokulawulwa kwezimali. ?Ohlelweni lwethu lwentuthuko edidiyelwe olukhona njengamanje, siwuMasipala sifuna ukusebenza ngendlela ehambisana nomthetho nezoqeda inkohlakalo nokukhwabanisa,? kusho uGumede. Uma kukhona umsebenzi kaMasipala noma ilungu lomphakathi elinobufakazi benkohlakalo, kumele babike leyo nkohlakalo emnyangweni kaMasipala wezoPhenyo kule nombolo ethi 0800 20 20 20 noma nge-email: ombuds@ durban.gov.za UMasipala awuyibekezeleli inkohlakalo ngakho ke awusoze wadalula igama lalowo osuke ebikile. charmel.payet@durban.gov.za
CHARMEL PAYET UMASIPALA weTheku unentshisekelo yokuhlomisa nokuthuthukisa intsha kanti ugqugquzela intsha ukuba iqhamuke namasu amasha, yenze imisebenzi yobuciko ezokhombisa ukuthi ifisa lube njani uhlelo lweDolobha lwezokuthutha eminyakeni ezayo. Umsebenzi wobuciko wethulwe phambi kuka- Mondli Mthembu, onguSihlalo weKomidi lezokuHlaliswa kwaBantu nokuHweba. Kulomcimbi obungomhlaka 26 Okthoba bekunabashovi kanye nabanye abasebenzi boMkhandlu. Lomcimbi ububanjelwe eGo!Durban Cycle Academy KwaDabeka Adventures. UMthembu kumjabulisile ukubona ubuciko obuqhamuke nabantu abasha beGo!Durban Cycle Academy okukhombisa ukuthi unjani umbono wabo ngohlelo lwezokuthutha lweDolobha. Lomcimbi wenziwe ngesikhathi esihle njengoba u-Okthoba kuyinyanga yezokuThutha kanti kuhlelwe imikhankaso eminingi yokuqwashisa abantu ngeqhaza elibanjwe ngezokuthutha ekuthuthukiseni imiphakathi. UMthembu uthe ubuciko bentsha bunalento abebeyicabanga mayelana nohlelo lwezokuthutha lweDolobha. Uthe ukunikeza intsha ithuba kulezi zinhlelo kusiza ekuyenzeni icabange ngeDolobha eliphephile nelixhumanisa izindawo. Izingane ezingaphezu kuka-100 ezifunda eGo!Durban Cycle Academy bezihlangene eNanda Adventure Park kanye naKwaDabeka Adventures kula masonto adlule ukuzobonisa ukuthi yini eziyicabangayo ngekusasa. Eminye yemisebenzi iqokelwe ukuba ifakwe kuma-banner azofakwa emahhovisi omnyango wezokuThutha kuMasipala okuzokube kuqhakanjiswa ngawo iNyanga yezokuThutha. UMthembu ngenkathi ekhuluma nezingane uzibongele kakhulu ngentshisekelo yazo kanye nemizamo yazo ekuqhamukeni nemisebenzi emihle egqugquzela wonke umuntu ukuba enze okungcono ngohlelo lwezokuthutha. Ukuzibophezela kweTheku kulezi zinhlelo kuphinde kwaqiniswa ukukhishwa kwamabhayisikili anikezwe isikhungo seGo!Durban Cycle Academy kanye neDurban Green Corridor. La mabhayisikili asanda kusetshenziswa ukukhangisa kwiSustainable Living Expo lapho bekuqhakanjiswa uhlelo lwezokuthutha olusha olungasebenzisi izimoto, olwaziwa nge Non-Motorised Transport (NMT). Lolu hlelo lwakhelwe ukuthi kukhuthazwe ukuhamba ngezinyawo, amabhayisikili, ukugijima kanye nezihlalo zabakhubazekile ezinamasondo neziqhutshwayo. ?Ukwakhiwa kweNMT kuyingxenye ebalulekile yokusimamisa ikusasa lezokuthutha eDolobheni. Ukwakhiwa kwezikhungo zokushova amabhayisikili kuyingxenye yokwakha nokuvuselela isiko lokuhamba ngezinyawo nokushova amabhayisikili. Sizoqinisekisa ukuthi liyehla izinga lokusetshenziswa kwezimoto,? kwengeza uMthembu. charmel.payet@durban.gov.za Zandile Gumede IMeya yeTheku
USihlalo weKomidi lezokuHlaliswa kwaBantu nokuHweba UKhansela uMondli Mthembu, (owesibili kusuka kwesokudla) kanye neKhansela lakuWadi 20 uMandla Mbambo (owesibi kusuka kwesokubunxele) banikele ngamabhayisikili ayisithupha kwiGo!Durban Academy njengoba kugujwa inyanga yezokuThutha. AMAFOMU OKUNGENELA ATHOLAKALA KU
INGQUNGQUTHELA YE-ESSENCE FESTIVAL